Diyaarad rakaab ah oo shil gashay kuna gubatay Texas, 21 qof ayaa badbaaday
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Diyaarad rakaab ah oo shil gashay kuna gubatay Texas, 21 qof ayaa badbaaday
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Diyaarad rakaab ah oo shil gashay kuna gubatay Texas, 21 qof ayaa badbaaday.
Sida laga soo xigtay sheriff -ka deegaanka Troy Guidry, dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii 21 -ka ayaa si nabad ah ku soo baxay, in kasta oo hal qof la dhigay isbitaalka dhaawacyo dhabarka ah.
Shilka ayaa ka dhacay Degmada Waller, oo u dhow magaalada Katy, una dhow Madaarka Fulinta ee Houston.
In kasta oo uu dabku si weyn u burburiyay diyaaradda, haddana lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay, dhulka ama rakaabka.
Diyaaradda rakaabka ah, oo nooceedu ahaa MD-80, ayaa kacaysay abbaare 10kii subaxnimo ee xilliga maxalliga ah, kuna sii jeeday Boston, Massachusetts.
Diyaarad rakaab ah ayaa ku burburtay kuna gubatay Degmada Waller, oo u dhow magaalada Katy, Texas una dhowdahay Madaarka Fulinta ee Houston maanta, sida laga soo xigtay Waaxda Badbaadada Dadweynaha ee Texas.
Diyaarad rakaab ah, iyo MD-80, ayaa soo degtay oo gubatay, sida laga soo xigtay muuqaallo yaab leh oo laga soo qaaday goobta.
Waxaa la yaab leh in dhammaan 21 -kii qof ee saarnaa ay awoodeen inay ka baxsadaan diyaaradda, sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka.
Muuqaalo laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya daruuro aad u weyn oo qiiq madow ah oo cirka isku shareeray iyadoo shaqaalaha dab damiska ay isku dayeen inay burburiyaan burburka gubanaya.
Goobta shilku ka dhacay ayaa u dhow geeska Morton iyo Cardiff Road. In kasta oo uu dabku si weyn u burburiyay diyaaradda, haddana lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhashay, dhulka ama rakaabka.
Shilka ayaa lagu soo waramayaa inuu dhacay xilli diyaaradda oo nooceedu ahaa MD-80 ay kici jirtay abbaare 10-ka subaxnimo xilliga maxalliga ah, kuna sii jeeday Boston. U jihaysan dhanka woqooyi, sida muuqata waxay ku guul -darraysatay inay gaadho meel sare dhammaadka dhabaha ay diyaaraduhu ku ordaan waxayna beddelkeeda ka gudubtay waddada, aakhirkii way istaagtay oo dab qabsaday.